अनौठो च्यालेन्ज : महिलालाई जित्न सक्दैनन् कोही पुरुष ! – ramechhapkhabar.com
अनौठो च्यालेन्ज : महिलालाई जित्न सक्दैनन् कोही पुरुष !
सोसल मिडियामा विभिन्न प्रकारका च्यालेन्ज ट्रेण्डमा आउँछन् । यसपटकको च्यालेन्जको नाम सेन्टर अफ ग्रेभिटी रहेको छ । इन्स्टाग्राम र दोश्रो सोसल मिडिया प्रयोगकर्ता लगातार यस च्यालेन्जलाई पूरा गर्ने प्रयासमा हुन्छन् । यो च्यालेन्जलाई लिएर एउटा अर्को तथ्य बाहिरिएको छ । यो काम पुरुषले राम्रोसँग गर्न सक्दैनन् तर महिलाले यो काम सहजै गर्न सक्दछन् ।
के हो सेन्टर अफ ग्रेभिटी ?
यो च्यालेन्ज घुँडाको सहयोगले बस्नुपर्ने हो । यो समयमा तपाई पूर्ण रुपमा झुकेको देखिनुहुन्छ । त्यसपछि दुवै हात घाँटीमा लगाउनुपर्ने हुन्छ । केही समयपछि एक हात कम्मरमा लैजानुपर्दछ र अर्को हात घाँटीमै राख्नुपर्दछ ।
एक हात पछि लगेपछि अर्को हात पनि पछाडी लैजानुपर्ने हुन्छ । यो च्यालेन्जलाई अब यत्तिकैमा रोक्नुपर्ने हुन्छ । यो च्यालेन्ज गर्दा तपाईले समय सुरक्षाको ध्यान राख्न आवश्यक छ । यदि यसमा तपाई असफल भए तपाईलाई नाकमा चोट पनि लाग्न सक्छ । यसका कारण केही पुरुषलाई चोट पनि लागिसकेको छ
समझदार आफ्ना श्रीमान् समझदार होस् भन्ने चाहन्छिन्, महिलाहरु । आफुलाई बुझ्ने, सहयोगी, कुनैपनि कुरालाई सही ढंगले मूल्यांकन गर्ने पु’रुषलाई श्रीमान्को रुपमा अं’गाल्न चाहन्छन् । ।